FileRescue Professional 4.8 Build 197 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ဖိုင်တွေမှားဖျက်မိတဲ့အခါ ( Shift + Delete ), Virus, Trojan, software error တွေကြောင့် ပျက်စီးသွား ပျောက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အလွယ်တကူ ပြန်ရှာပေးမယ့် FileRescue Professional ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် keygen အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ဒေါင်းလော့ဖိုင်ထဲမှာ Install Note ထည့်ပေးထားပါတယ်... Keygen အသုံးပြုပုံကို အရင်တင်ထားတဲ့ အသုံးပြုပုံနှင့်တူလို့ လိုအပ်ရင် ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... FileRescue Professional ကို အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
FileRescue Pro is an easy to use, but powerful software utility designed to restore accidentally deleted files and folders.It allows you to recover files that have been removed from the Recycle Bin, as well as those deleted by-passing the Recycle Bin (e.g. Shift-Delete). It will also recover files deleted by virus or Trojan attacks, unexpected system shutdown and software faults.
FileRescue Professional 4.8 Build 197 (3.18 Mb)